Mashiinka Sumadaynta Wajiga Sare ee Tooska ah ee ugu Wanaagsan Soo Saaraha iyo Warshada |Ipanda
Mishiinka Calaamadaynta Dusha sare ee Toos ah
Alaabooyinka gaarka ah sida: rootiga, daboolka qolofta tortoise, jalaato jalaatada, baytari, shaambo dhalada fidsan, jel qubeyska dhalada fidsan, sanduuqa CD, bacda CD, sanduuqa laba jibbaaran ee suufka suufka, khafiifka, dareeraha sixitaanka, baaldiga rinjiga, kartoonka, iwm.
Calaamadaha ku habboon alaabooyinka fidsan waa calaamado isku dhejisan oo loogu talagalay mashiinnada duubista.Sida qalabka, elektiroonigga, qalabka waraaqaha, cuntada, dawooyinka, waxyaalaha la isku qurxiyo, waxyaabaha maalinlaha ah loo baahan yahay, caagagga, dhalooyinka, durbaannada iyo alaabada kale ee dhirta kiimikada.
Halbeegyada Farsamo ee ugu Muhiimsan
Cabbirka mashiinka L2000xW550xH1600mm
Xawaaraha wax soo saarka 60-350PCS/daqiiqo (Waxay ku xidhan tahay agabka iyo sumadaha)
Shayga Summada Dhererka 30-210mm
Shayga Dhumucda leh 20-120mm
Sumadda Dhererka 15-200
Dhererka summada 25-300
Ku dheji saxnaanta calaamadda ±1mm
Gudaha gal 76mm
Isbedbeddelka Dhexroorka Dibadda 300mm
Bixinta Korontada 220V50/60HZ 1.5KW
● Mashiinka oo dhan waxa uu ka samaysan yahay S304 bir ah iyo aluminium aluminium heersare ah oo anodized ah.
● Madaxa calaamadinta waxaa wata matoor horumarsan.
● Dhammaan indhaha korantada waa indho koronto oo heer sare ah oo lagu sameeyay Japan ama Jarmalka Galbeed.
● PLC waxay la shaqeysaa kontoroolka isdhexgalka mashiinka.
● Goobta calaamadinta waxaa lagu hagaajin karaa hore iyo gadaal, dhererka iyo dhererka.
● Duubabka waraaqaha lagu dabaqi karo waxay leeyihiin dhexroorka gudaha ee Φ76mm iyo dhexroorka dibadda ee Φ360mm ama ka yar.
● Baaxadda suunka wareejinta: 137mm (xajmiga ballaaran waxaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha).
● Tilmaamaha summadaha lagu dabaqi karo: ballaca warqadda hoose 20-130mm (xajmiga ballaaran ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha).
● Saxnaanta calaamadinta ± 1mm ​​(marka laga reebo qaladka u dhexeeya calaamadda iyo shayga).
Guddi hawleed fudud ayaa loo isticmaali karaa in lagu hagaajiyo laguna xakameeyo
xogta shaqada, fududahay in la shaqeeyo oo si weyn loo yareeyo khaladaadka shaqada.
Indhaha korantada waxay ogaan karaan agabka marka ay dhex maraan.lt ma shaqayn doono ilaa walxaha la ogaado
Bar calaamaduhu waxay gacan ka geysataa hagaajinta booska calaamadaynta halka calaamadda kala soocida daabku si fiican u kala saari karto sumadaha, dhammaan kuwani waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta tayada shaqada.
Labadan buro oo wareeg ah ayaa loo adeegsadaa si loo hagaajiyo booska calaamadaynta jiifka.
Gaadhi-qaadiyaha waxa loo isticmaalaa in lagu kala wareejiyo agabka.Xawaaraha shaqadu waa la hagaajin karaa, hawl-wadeenku waxa uu ku hagaajin karaa xawaaraha hadba baahidooda.
Matoorka xoogga leh wuxuu ka dhigayaa mashiinku inuu u shaqeeyo si deggan oo buuq yar.lt wuxuu xaqiijiyaa wakhtiga dheer ee shaqada.
Hore: Mashiinka Calaamadaynta Gacma-gacmeedka Tooska ah
Xiga: Khadka Soo saarista Dareeraha Kiimikada ee Tooska ah
Mashiinka Calaamadaynta Gacma-gacmeedka Tooska ah
OPP BOPP Toos ah Mashiinka Calaamadaynta Dhallaanka
Mashiinka Calaamadaynta Xabagta Qabow ee Tooska ah
Mishiinka Calaamadaynta Horizontal
Mashiinka Calaamadaynta Laba-dhinac ee Toos ah
Mishiinka buuxinta dareeraha tooska ah Mashiinka Buuxinta Saliida Mashiinka buuxinta malabka oo toos ah Mashiinka Buuxinta Tuubbada Bistoon mashiinka buuxinta saliidda cuntada mashiinka buuxinta malab